ပုံနှိပ်ဆားကစ်,printed wiring, printed board, printed circuit board (PCB), printed wiring board(PWB), rigid printed board, Hybrid high board, high layer board. Eight-layer board. - တရုတ် circuiပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး�ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့�ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်prPCBed ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့iPWBoarတင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့riHybrid ကိုမြင့်မားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့gidမြင့်မားသောအလွှာဘုတ်အဖွဲ့Hyရှစ်အလွှာဘုတ်အဖွဲ့ high layer board. Eight-layer board. ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » Multilayer PCB
ပုံနှိပ်ဆားကစ်,ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး, ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့(PWB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, Hybrid ကိုမြင့်မားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့, မြင့်မားသောအလွှာဘုတ်အဖွဲ့. ရှစ်အလွှာဘုတ်အဖွဲ့.
လေဟာနယ် အထုပ်,20PC များ / အိတ်,ပျဉ်ပြားအကြားစက္ကူ
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=my&sl=en&tk=287581.151789 from this server. That’s all we know.
တင်းကျပ်ရှစ်အလွှာ Hybrid ကိုဖျင် PCB
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=my&sl=en&tk=723339.866875 from this server. That’s all we know.
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=my&sl=en&tk=101382.507830 from this server. That’s all we know.
အတွင်း 1 OZ, ပြင�အောင်ဘက်တွင်ရှိသော 1.5 OZ
အဝတ်အချည်းစည်းဘုတ်အဖွဲ့, ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့, Hybrid ကိုမြင့်မားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့, တင်းကျပ်ရှစ်အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, အလွှာရေတွက်ဖြစ်ပါသည် 8, IPC CLASS 3, အထိခိုက်မခံတဲ့အစိမ်းရောင်, Error 403 (Forbidden)!!1
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=my&sl=en&tk=333.406269 from this server. That’s all we know. , Rogers5880 အလွန်စျေးကြီးတဲ့ကြွေပန်းကန်ဖြစ်ပါသည်; သော L1 နှင့်-L2-L3-L4 Rogers5880 ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်; မျက်စိကန်းသောသူနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံအပေါက်ပုံစံဒီဇိုင်း, L1 နှင့်-L2 အတွက် L1-L4, L5-L8, မျက်စိကန်းသော, မျက်စိကန်းသော L3-L4; အဆိုပါဗဓေလသစ်အဆာလုပ်ငန်းစဉ်သည်; သတ္တုပန်းကန်အစွန်းထုပ်. Cu ထူ: အတွင်းစိတ်အလွှာ 1 အောင်စပြင်အလွှာ 1.5 အောင်,
2.2မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ, အဆိုပါဝိသေသဖြစ်ပါတယ် 8 Error 403 (Forbidden)!!1
Your client does not have permission to get URL /translate_a/t?client=te&v=1.0&tl=my&sl=en&tk=556603.937355 from this server. That’s all we know. . လျင်မြန်စွာအလှည့်ရှေ့ပြေးပုံစံ, တစ်ချိန်ကစမ်းသပ်ပြီး, မြင့်မားသော Volume ကိုထုတ်လုပ်မှုလက်ခံသည်. ဖောက်သည်အဓိကအား BMS များအတွက်အသုံးပြုရန်. DHL နေဖြင့်ဖြန့်ဝေဖော်ပြ, ယူပီအက်စ်, Fedex, TNT သို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်း, ပင်ပင်လယ်နားမှာက. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားပါသည်, မည်သည့်လိုအပ်ချက်များကိုပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
2-ရိုးရှင်းသော Panel ကို FR4 Tg150 ENIG 2u "က ISO PCB အလွှာ 9001 သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း
4 FR4 Layers PCB ENIG 1U "ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB မြန်ပေးပို့
multilayer ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့, တင်းကျပ် multilayer ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ခြောက်အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, FR4 S1141, ကိုရွှေလက်ချောင်းများဘုတ်အဖွဲ့.
PCB က Black ပစ္စည်းစိတ်တိုင်းကျ PCB2အလွှာ HASL အမြန်အလှည့်ထုတ်လုပ်သူ